'रोगभन्दा निर्दयी त सरकार रहेछ'
प्रकाशित: बिहिबार, जेठ २०, २०७८, १८:०८:०० अंगद सिंह
काठमाडौं- रोग निर्दयी कि सरकार? हो– रोग निर्दयी हुन्छ। यसले उमेर, वर्ग र भूगोल केही हेर्दैन, जसरी कोरोना भाइरसले गरिरहेको छ। तर मजुदरका लागि रोगभन्दा सरकार निर्दयी भइदिएको छ यतिबेला। सहरी क्षेत्रका विपन्न मजदुर सरकारमा बस्नेहरुकै निर्दयीपनको सिकार भएर भोको पेट बस्न बाध्य छन्।
निषेध आदेशका बेला निर्दयी सरकारको सिकार भएका धेरै मजदुरमध्ये एक हुन्, ६५ वर्षीय गोपाल थामी। भारी बोक्न पाइन्छ कि भन्ने आशालाई न झरीले रोक्छ न निषेध आदेशले। हातमा नाम्लो बोकेर गोपाल थामी कालीमाटीबाट न्युरोडसम्म पुग्छन्। न्युरोड पुगेको पाँच घण्टा भइसकेको छ। भारी बोक्न कसैले बोलाएको छैन।
सुनसान छ योगवीरसिंह मार्ग। फाट्टफुट्ट स्थानीयबाहेक कोही देखिँदैन। सडकमा एम्बुलेन्स र प्रहरीका गाडी मात्रै चलेका छन्। भारी बोक्न पाए एक छाक भात खान पाइन्छ भनेर डेराबाट निस्किएका गोपाल धेरै बेर बस्दा पनि केही पाउँदैनन्। गफ गरेर समय कटाउन पनि आसपासमा कोही छैनन्। छन् त केही कुकुर मात्रै।
‘३० वर्ष टाउकोमा नाम्लो राखेरै बिताएँ, अब कहाँ जानु? घरभित्र बसेर भोकै मर्नु भन्दा त कहिलेकाहीं काम पाइन्छ भनेर निस्केको नि!’
गोपालले बोकेको सेतो नाम्लो पुरानो भएर कालो भइसकेको छ। चाउरिन थालेको शरीरमा छालाका लोता देखिन थालिसकेका छन्। खुट्टा फुटेका छन् दोलखाबाट आएका गोपालका। ‘वल्लो–पल्लो गल्ली गर्दै पाँच घण्टा बितिसक्यो तर अहिलेसम्म केही पाइएन,’ उनी निरास मुद्रामा भन्छन्, ‘आज रित्तो हात फर्किनुपर्ला जस्तो छ।’
उनले आस भने मारेका छैनन्। ‘साँझसम्म बस्छु, केही पाइए बोक्छु नत्र कोठा फर्किन्छु,' उनले भने। गोपाल चारैतिर आँखा डुलाइरहेका छन्। उनको खोजी हो, कसलै बोलाइहाल्छ कि! ६५ वर्षीय गोपालले जिन्दगीका ३० वसन्त भारी बोकेरै बिताए। कहिले बल्खु, कहिले कालीमाटी त कहिले न्युरोड। यही उनको कार्यक्षेत्र हो।
भन्छन्, ‘३० वर्ष टाउकोमा नाम्लो राखेरै बिताएँ, अब कहाँ जानु? घरभित्र बसेर भोकै मर्नुभन्दा त कहिलेकाहीं काम पाइन्छ भनेर निस्केको नि!’ बल छँदा क्विन्टलभन्दा बढी भारी बोक्न सक्ने थामी अहिले कमजोर भएका छन्। शरीरले भारी थाम्न सक्दैन। तैपनि पेट त पाल्नै परो!
‘घरबेटीले बाहिर गएपछि घर नआउनु भन्छ, म कहाँ जानु? भात खोज्न जानु कि भोकै मर्नु?’
टाउको र पिठ्यूँमा भारी नपरेको धेरै दिन भइसकेको छ। ‘काम नपाएर निधार नताते पनि भोकले मनपेट तात्छ,’ उनी गुनासो गर्छन्।
महिनाको पाँच हजार भाडा तिरेर कालीमाटी तरकारी बजार नजिकै बस्छन् गोपाल। घरभित्र हुँदा भोकले तर्साउँछ अनि बाहिर निस्किँदा घरबेटीको व्यवहारले। ‘घरबेटीले बाहिर गएपछि घर नआउनु भन्छ, म कहाँ जानु? भात खोज्न जानु कि भोकै मर्नु?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
कुर्सी र सोफामा बसेर अनेक थरी खानेकाुरा खानेहरुलाई मजदुरको पीडा थाहा नभएको उनको आरोप छ। भन्छन्, ‘हुनेखानेले सबैलाई आफूजस्तै सोच्छन् र भनिदिन्छन्- एक हप्तासम्म बाहिर ननिस्कनू, खाद्यान्नको जोहो गर्नू।’ गोपालजस्ता एक छाकका लागि गल्लीगल्ली भौंतारिरहनु पर्नेले एक हप्प्तासम्मका लागि खाने कुराको जोहो कहाँबाट गर्नु।
‘भारी नपाइए म त भोकै पर्छु, कसरी एक हप्तासम्मलाई खाद्यान्न जोहो गर्ने? सरकारले गरिबको पीडा बुझ्दैन–सुन्दैन न गरीखान दिन्छ न खाना दिन्छ,’ गोपाल दुःखेसो गर्छन्। गोपालजस्ता ज्यालादारी मजदुरले काम पाए पो खानेकुरा जोहो गर्ने हुन् काम नै नपाए कसरी जोहो गर्ने? यसबारे स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छैनन्।
गोपालले एक सातामा एक दिन कालीमाटी तरकारी बजारमा काम पाए। तीन सय कमाए। त्यो पैसाले तीन छाक भात खाएका थिए उनले। भन्छन्, ‘सधैं कमाइ हुन्छ भन्ने हुँदैन, कुनै दिन भोकै सुत्नुपर्छ।’
कमाइ भएको दिन होटलमा खान्छन् गोपाल। नभएको दिन निःशुल्क खाना पाइने ठाउँमा लाम लाग्न पुग्छन्। भन्छन्, ‘कमाइ भएको दिन मैले खाने भातले एक अर्को गरिबले पेट भर्छ।’ काठमाडौंमा भारी बोकेरै उनले घरपरिवार पालेका हुन्। भारी बोकेरै दुई छोराछोरीलाई हुर्काए–पढाए।
तर अब उनी उमेरका कारण भारी बोक्न सक्दैनन्। काम हुँदा दिनको हजार-पन्ध्र सय र दुई हजारसम्म कमाउँछन् उनी। तर अहिले उनको गोजी रित्तिएको छ। कोठामा पनि मुठीभर दाल–चामल मात्रै बाँकी छ। निषेध आदेश बढ्दै गएपछि कोठा भाडा कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ गोपाललाई।
भन्छन्, ‘काम नभएका बेला कसरी पाँच–पाँच हजार तिर्नु? कोठा छोडौं कसरी छोडौं, घर जाऊँ कसरी जाऔं?’ कोठा छोडे सडकको बास हुने र नछोडे भाडा कसरी तिर्ने भन्ने पीरले सताइरहन्छ उनलाई। काम पाउने–नपाउने निश्चित नभए पनि हातमा नाम्लो लिएर दैनिक बिहानै निस्किन्छन्। उसै गरी चहार्छन् कालीमाटी, बल्खु र न्युरोडसम्म। न्युरोडका हरेक गल्ली र कुनाकुना फुटेका पैतलाले नापिरहन्छन्।
उनलाई कोरोना भाइरसले ज्यान लिन्छ भन्ने डर पनि थियो। तर काम नगरे खान नपाइने भएपछि डर हराएको छ। भन्छन्, ‘सरकार रोग आयो भन्दै काम बन्द गर्छ अनि गरिब भोकै मरेको रमिता हेर्छ, रोगभन्दा निर्दयी त सरकार रहेछ।
निषेध आदेशका कारण पसल, गोदाम सबै बन्द छन्। काम नै छैन बजारमा। तर पनि उनी कहिले तरकारी बोक्छन् त कहिले स्वास्थ्य सामग्री। निषेध आदेश सुरु हुनुअघि उनले घरमा १३ हजार रुपैयाँ पठएका थिए। कमाइ राम्रै थियो। भारी बोकेरै घरखर्च, कोठा भाडा र आफ्नो खर्च निकालेका थिए उनले।
घरबाट कोरोना लाग्ला बचेर बस्न भनेर फोन आउँछ। म ठिक छु, चिन्ता नगर्नु भन्ने गरेका छन्। उनलाई घर जान मन नभएको होइन तर घर आउँछु भन्न सक्दैनन्। कारण एकातिर निषेध आदेश छ अर्कोतिर घरपरिवारले पीर मान्छ। ‘निर्दयी सरकारका मान्छेलाई भोकको पीडा र मजदुरको व्यथा के थाहा? पेट पाल्न घण्टौं भौंतारिनुपरेको भए थाहा हुन्थ्यो,’ उनले भने।
उनलाई कोरोना भाइरसले ज्यान लिन्छ भन्ने डर पनि थियो। तर काम नगरे खान नपाइने भएपछि डर हराएको छ। भन्छन्, ‘सरकार रोग आयो भन्दै काम बन्द गर्छ अनि गरिब भोकै मरेको रमिता हेर्छ, रोगभन्दा निर्दयी त सरकार रहेछ।’